people Nepal » आजको तपाईको राशिफल : मंसिर ३ गते / नोभेम्बर १९ तारिख आइतबार आजको तपाईको राशिफल : मंसिर ३ गते / नोभेम्बर १९ तारिख आइतबार – people Nepal
आजको तपाईको राशिफल : मंसिर ३ गते / नोभेम्बर १९ तारिख आइतबार
Posted on November 19, 2017 by Durga Panta
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल मार्गशीर्ष ३ गते आईतवार इश्वी सन २०१७ नोभेम्बर १९ तारीख मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथी चन्द्रमा तुला वृश्चीक राशि सूर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु विश्व शौचालय दिवस –
स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला तथा सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला ।
तपाईको प्रगतिमा आरीस गर्ने हरुबाट बच्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान लिनु होला । यात्रा खर्चकर रहनेछ ।
मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर प्राप्त रहनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि मध्यम रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । प्रिय खबर द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
खर्च बढ्ने योग रहेकोले सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्नेछ । कुराकाट्ने ब्यँितहरु को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ । खानपानमा बिचार पूर्याउनुहोला ।
पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । प्रतिश्पदा मुलक कार्यमा तपाई अब्बल रहनु हुनेछ । शुभ चिन्तकहरुको प्रयाप्त साथ प्राप्त हुनाले कार्यसम्पादनमा सहजता रहनेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।